Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » Ulingo olutsha lweklinikhi yoNyango loMhlaza weProstate
I-Hinova Pharmaceuticals Inc., inkampani yekliniki ye-biopharmaceutical egxile ekuphuhliseni unyango lwenoveli yomhlaza kunye nezifo ze-metabolic ngokusebenzisa itekhnoloji echongiweyo yeprotein, ibhengeze ukuba isigulana sokuqala esinomhlaza we-prostate onganyangekiyo kwi-metastatic castration (mCRPC) ifakwe ngempumelelo kwiSigaba soku-I. uvavanyo lwezonyango lwe-HP518, i-chimeric ekhethiweyo kakhulu kunye ne-oral bioavailable degrader ejolise kwi-androgen receptor (AR). Isifundo esiqhubekayo se-Open-label Phase I e-Australia siya kuvavanya ukhuseleko, i-pharmacokinetics, kunye nomsebenzi wokulwa ne-tumor we-HP518 kwizigulane ezine-mCRPC.
I-HP518 iye yafunyaniswa yaze yaphuhliswa liqonga leprotein ekujoliswe kulo likaHinova lokufunyanwa kweziyobisi. Inamandla okoyisa ukunganyangeki kwechiza lomhlaza wedlala lesidlala ngenxa yotshintsho oluthile oluthile lwe-AR.
I-Chimeric degraders ziyi-bifunctional molecules ezincinci ezikhuthaza ukuthotywa kweeprotheyini ezijoliswe kuyo kunye namandla aphezulu kunye nokukhetha okuphezulu. Obu buchwephesha bunakho ukujolisa kwiithagethi ezingasetyenziswayo kunye nokoyisa umba wokuxhathisa kumachiza kumachiza emolekyuli amancinci esintu.
"Oku kubalulekileyo kwinkqubela phambili yemigudu yethu yokufumana iziyobisi kwisifundo seklinikhi," watsho uYuanwei Chen, Ph.D., uMongameli kunye ne-CEO ye-Hinova. "Siyonwabile kwaye sizinikele ekuziseni iindlela zonyango olutsha kwizigulana kwihlabathi liphela!"
Ngeqonga elichongiweyo lokuthotywa kweprotheyini yokufumanisa iziyobisi, i-Hinova inokuhlola umsebenzi wokuthotywa kweprotheyini ngokukhawuleza kwaye ifezekise uyilo olusebenzayo kunye nokuphucula i-chimeric degraders. Ngapha koko, i-Hinova inamava anzulu ekulawuleni ukwenziwa kweekhemikhali kwi-Chimeric degrader compounds.
Abahambisi beenqwelo moya baseHawaii baqinisekisa iminyaka emi-5 entsha...
Izigulana zeCrohn's Disease ezibonisa iZiphumo ezingcono
Ubungakanani beMarike yee-Arhente ezidibanisayo 2017 Isitshixo seHlabathi...
Indlela yokuBhankisha kwi-Intanethi iliphucula njani ishishini lakho
Iqela leenqwelomoya zase-Ethiopia limisela umphathi omtsha...
Inqwelomoya entsha isuka eSan Jose isiya e-Eugene, eOregon...